Tsy avela hikofoka mandritry ny herintaona sy tapany aloha ny tompon-tanindrazana ao Soamahatamana sao hanelingelina ny sinoa akama. Anaovana antsojay ny vahoaka eny Ilafy sao ratsy karakara ny namana karana. Dia ahoana koa ? Ny vazaha moa dia tsy azo adinoina fa tsy maintsy alefa eny aloha. Tena kivy be mihitsy aho ry Jean manana anareo ho mpitarika marina mafy a ! Resaka frankofolia ve no hanerena anay tsy hikandra ? Marina fa hoe mandray karama na dia 6 andro tsy hiasa aza izany ny mpiasam-panjakana fa mba ahoana kosa ireo tsy miankina, indrindra ireo miasa tena ? Sao dia mba tokony hosoloiko samirery ary ry Jean ny mpanolotsaina anao ao an-dapa ao. Marina e ! Tena na ny zanak’atidohako irery ary ve tsy aharesy ny atidohan-drizalahy mitambatra. Heritrereto ihany aloha fa sao dia ajabak’ireo ao ianao ny farany a ! Raha tsy ianao mihitsy angamba no efa nanapa-kevitra ho any amina tontolo hafa manokana any dia nisafidy ny tsy hihaino anay aty ambany.